Ma ogtahay in Google uu keydiyo macluumaadkaaga? | Saxil News Network
Google way garaneysaa waxa aad raadineyso, waxa aad daneyneyso, iyo baraha kale ee aad booqato, iyo waxyaabo kale oo badan ayey kaa og tahay.
Waxaan ka hadlaynaa Google oo ah barta caalamka ugu wayn ee macluumaad iyo akhbaar laga raadiyo.
“Marka aad adeegga Google isticmaaleyso, waxaad nagu aamintay macluumaadkaaga.”
Taasi waa sida ay shirkaddan u sheegtay macaamiisheeda, waana leenka ugu horeeya ee shuruucda xuquuqda gaarka ah ee Google.
Balse waxa aadan garan karin waa in Google ay ku siineyso fursad aan ku tirto macluumaadkaaga ku keydsan qeybta “my activity” oo keydisa waxa aad ka dhex sameyso barta.
Google oo Hindiya ka samaynaysa wi-fi internet oo lacag la’aan ah
Mashquulka telefoonka ‘wuxuu sababaa walwal’
Halkan ka eeg sida aad ku tirtiri karto adigoo dhowrkan tallaabo qaadaya.
1. Tir dhaqdhaqaaqeyga
Xilli kasta ee aad Google wax ka raadiso, shirkadda waxay keydineysaa macluumaadka la xiriiro waxa aad raadisay, waxayna ki xireysaa cinwaankaaga.
Waxay sidoo kale diiwaan gelineysaa dhaqdhaqaaq kastoo aad sameyso, sida in aad foom buuxiso ama in aad furto cinwaankaaga Gmail-ka.
Akhbaarta oo dhan waxaa lagu keydinayaa qeybta loo garanayo “dhaqdhaqaaqeyga” – waana halka aad u baahan tahay in aad isha ku hayso.
Lahaanshaha sawirkaCAPTURA DE PANTALLA
Waxaad furi kartaa keyda baaridda si aad waxyaabo gaar ah u eegto ama aad bogag u tirto (ka dib raadi macluumaaadka la xiriira, haddii aad u baahato).
Sidoo kale waxaa tirtiri kartaa dhammaad waxyaabihii aad eegtay ama raadisay adigoo taariikh gaar ah ku cayimaya.
“Fursadda ugu wayn ee kuu furan” waa in aad tirto dhammaan waxkastoo aad eegto “xilli kaste”.
Digniin ayay Google ku tuseysaa oo la xiriirta cawaaqib xumada ka dhallan karto ficilladaada, balse sida xaqiiqada ah, in aad tirto macluumaadkaaga ku jiro Google, wax saameyn ah kuguma yeelanayaan, xitaa sida cinwaankaaga Google iyo codsiyadaada shaqo.
2. Tir dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada YouTube
Google waxay sidoo kale dabagashaa dhammaan waxyaabaha aad ka baarto YouTube.
Balse tani xitaa si fudud ayaad uga feejignaan kartaa. Marka hore guji “history” oo ah meesha keydka oo dhanka bidix ah. Ka dib guji “nadiifi dhammaan wixii aan baaray”, ama waxaad si gaar ah u raadin kartaa waxyaabaha qaar ee si gaar ah aad u daawatay.
Halkan waxaa ku jiro lifaaq ku saabsan keydka YouTube ee ah sida aad wax u baarto
3. Sidee loo tiraa waxkasta oo ay kaa hayaan kuwa wax xayeysiiya
Ha u maleynin Google in ay macluumaadkaaga ay keydineyso oo keliya, balse waxay u sii gudbineysaa dadka wax xayeysiiya.
Taasina waa sababta aad markasta u aragto xayeysiis xiriir la leh waxa aad raadineyso ama daawato.
Laakiin haka walwalin – waxaad ogaan kartaa macluumaadkaaga loo gudbiyay kuwa xayeysiinta sameeya.
Sida aad u tirto, fur cinwaankaaga Google ka dibna gal meesha ay ku qoran tahay “Personal info & privacy” ee akhbaartaada gaarka ah keydisa.
Lahaanshaha sawirkaGOOGLE – MARK SHEA
Markan waxaa sii gujisaa qeybta ah “Ads Settings”. ka dibna sii gal “Manage ads settings” oo fursad kuu siineyso in aad iska xirto.
Ka dib waxaad arki doontaa meel ay ku qoran tahay “Ads personalisation”. haddii aad iska xirto halkaasi, laguma so gaarsiin doono xayeysiismo la xiriira waxa aad ka baareyso ama macluumaadka kale ee Google ay kaa hayso.
Laakiin fursadda ah in aad dalbato in xayeysiis oo dhan aysan ku soo gaarin xilligan ma aysan diyaarin shirkadda Google.
Google waxay ku siin doontaa digniin ah in taasi aysan kuu wanaagsanayn, sababtoo ah ma arki doontid xayeysiimaha aad jeceshahay, si kastaba adiga ayey kugu xiran tahay waxa aad dooraneyso.
4. Tir meesha hayso keydkaaga Google
Haddii aad isticmaaleyso shay ku shaqeeya Android, Google waxay keydineysaa diiwaan la xiriiro baraha aad booqatay adigoo adeegsanaya mobile-kaaga ama Tablet.
Halkan ayaad ka eegi kartaa
Si aad macluumaadkan oo dhan uga tirto Google Maps, waxaad u baahan tahay in aad boggan booqato.
Waxaad iska xiri kartaa goob raadinta, waxaadna tiri kartaa dhammaan waxa ku keydsan ee maalinle ah ama waqtiyo badan ah.
Sidoo kale, Google wuxuu keydiyaa safarradaada iyo meelaha aad ku nagaatay. Haddaba waad tiri kartaa adigoo furaya meesha ay ku keydsan yihiin safarradaada taariikhihii hore.